I-whatsapp yewindows ifowuni ekugqibeleni ifumana i-emoji ebaluleke kakhulu yomnwe ophakathi
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-WhatsApp yeWindows Phone ekugqibeleni ifumana i-emoji ebaluleke kakhulu phakathi komnwe
I-WhatsApp yeWindows Phone ekugqibeleni ifumana i-emoji ebaluleke kakhulu phakathi komnwe
Abasebenzisi beFowuni yeWindows baqhelene kakhulu nokushiyeka ngasemva xa kuziwa kuhlaziyo losetyenziso. Ukuba usandula ukugculelwa ngabahlobo bakho be-iOS kunye ne-Android malunga nokunqongophala kwenkxaso ye-emoji entsha, ukulinda kwakho impindezelo ifikile. I-WhatsApp yeFowuni yeWindows isandula ukuqhushumba kuhlobo 2.12.170.0, kwaye ngelixa kukho ii-tweaks ezimbalwa apha naphaya, ukubanakho ukunika umntu & apos; umnwe 'uya kubonakala njengeyona nto ibaluleke kakhulu.
I-Emoji, ebhetele okanye embi, iyeyona ndlela iphambili yokuthetha kuzo zonke iindlela zosasazo zasekuhlaleni. Ngaphandle kokhetho olubanzi, imeko eguqukayo yemithombo yeendaba zentlalo inayo wasinyanzela isandla ye-Unicode Consortium, kwaye ngenxa yoko, thina & apos sinezinto ezininzi esinokukhetha kuzo.
Ifashoni mva, i-WhatsApp yeWindows Phone ijoyine ipati kwaye ngaphandle kwesandla esingahlambulukanga, ukubulawa kwezinye ii-emoji icon kunokufumaneka kukhululo lwamva nje loluntu. Kude kuloo nto, kukho & iiapos; kunye nokuphuculwa kophando kunye nenkxaso yezandi zangaphakathi nohlelo zesaziso.
Xa kuthelekiswa nohlelo lwe-Android kunye ne-iOS, i-WhatsApp yeWindows yeWindows ayikhathaleli okwangoku. Iimpawu ezibandakanyiweyo apha ziya kufunyanwa ngombulelo, ngokuqinisekileyo. Kodwa nantsi iapos sinethemba lokuba usetyenziso lwencoko oludumileyo luya kufumana ukuphuculwa kokusebenza ngaphezulu kohlaziyo oluthile olulandelayo lokulizisa ukuze liqale kunye noontanga balo.
Khuphela: WhatsApp ( Ifowuni yeWindows )
I-samsung galaxy s21 + ityala
Uzifunda njani iifayile kwiJava
I-LG & apos; s OLED vs Samsung & apos; s Super AMOLED: yintoni umahluko wobugcisa?
Iingcebiso eziluncedo ze-iOS 13 kunye namaqhinga e-iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
Ngaba abathwali bayigcina nini idatha yakho?